अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ?
Tuesday, 01.30.2018, 02:44pm (GMT5.5)
केही वर्षअघिसम्म नेपाल रक्तचन्द तस्करीको ट्रान्जिट जस्तै बनेको थियो । भारत हुँदै नेपालबाट चीनतिर तस्करी हुने बहुचर्चित रक्तचन्दनको नाम आजकल सुन्न छाडिएको छ र प्रश्न उठेको छ के रक्तचन्दनको तस्करी बन्द भएको हो ? काठमाडौंबाट सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाहुँदै चीनतिर रक्तचन्दन पठाइन्थ्यो । केही मात्रामा रसुवागढीबाट पनि । अहिले यसको कुनै चर्चा छैन । बरामद गरिएका करोडौं रुपैयाँका रक्तचन्दन सडिसकेका छन् ।
विगत दश वर्षमा दुई लाख १० हजार १२० किलोग्राम रक्तचन्दन सड्ने अवस्थामा पुगेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट विगत १० वर्षमा बरामद ती रक्तचन्दन शुरुमा आवश्यक कानूनको अभावमा र पछि कानून बने पनि सो कानूनअनुसार सम्बन्धित मुलुक (भारत)ले फिर्ता लैजान नमानेपछि अलपत्र परेको हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानूनअनुसार रक्तचन्दन बिक्रीवितरण गर्न प्रतिबन्ध छ ।
बरामद रक्तचन्दन १० वर्षदेखि वन विभाग, काठमाण्डु, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, सप्तरी, सर्लाही, झापा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देहीलगायत २० जिल्लामा कडा सुरक्षाका साथ राखिएको छ । त्यसमध्ये एक लाख किलोग्राम भन्दा बढी रक्तचन्दन वन विभाग र काठमाण्डु उपत्यकाका तीनै जिल्लामा रहेका छन् ।
केही वर्षअघि रक्तचन्दनको अवैध ओसारपसार हुँदा प्रहरीले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, दोलालघाट, उग्रचण्डीनाला, धुलिखेललगायतका क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न ठाउँबाट रक्तचन्दन बरामद हुनाका साथै तस्करसमेत समातिएका थिए ।
काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिम्खडाले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका अवरुद्ध भएको र चीनमा पनि उत्पादन शुरु भएका कारण यसको कारोबार नभएको अनुमान लगाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – “सुनको अवैध कारोबार फाट्टफुट्ट सुनिन्छ तर यसको कारोबार सुन्नमा आएको छैन ।”
रक्तचन्दनमा धेरै कडाइ भएपछि तस्करले शैली परिवर्तन गरेर रक्तचन्दनको तेलको अवैध धन्दा पनि चलाएका थिए । काठमाडौंँमा केही वर्षअघि ९० लिटर रक्तचन्दनको तेलसहित केही व्यक्ति फेला परेपछि तेलको पनि कारोबार भएको कुरा खुलेको थियो ।
रक्तचन्दन साइटिस सन्धिको अनुसूची–२ मा सूचीकृत छ । अनुसूची–२ मा सूचीकृत भएकाले व्यापार–व्यवसाय गर्न पाइने भए पनि भारत सरकारले व्यापार–व्यवसायमा पूर्णरूपले प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन्धि बमोजिम बरामद भएका वस्तु जुन देशमा उत्पादन भएको सोही ठाउँमा पठाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । चीनमा रक्तचन्दनको मूल्य प्रतिकेजी रु १६ हजारसम्म पर्छ ।
नाका केही समय खुल्दा फाट्टफुट्ट कारोबारसमेत भएको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “रसुवा नाकाबाट रक्तचन्दनको कारोबार सम्भव नभएकाले तस्करले भारतबाट नै रक्तचन्दन चीन पठाउँछन् ।”
काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्रबाट केही वर्षअघि झण्डै ९०० किलो अवैध रक्तचन्दन बरामद भएको जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत अर्जुन खड्का जानकारी दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बरामद भएका सबै रक्तचन्दन वन विभागलाई बुझाइएको र रक्तचन्दनको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी आठ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।